Maqaal//Markii Fatwadu Ku Xirnaato Hadba Dalabka Mareykanka | Halganka Online
Maqaal//Markii Fatwadu Ku Xirnaato Hadba Dalabka Mareykanka
Wasiirka Awqaafta Jabuuti Ayaa Iskugu Yeeray Waxa Lagu Tilmaamay Culimo Somaliyeed .
Asagoo Ka Dalbaya Fatwa Cusub ,Ragii uu yeeray ayaa u sheegay in fatwooyinkii hore fashilmeen.
marka la rabo in qaabka labadalo ,waxayna u dardaarmeen in la qabtay Shir loogu yeero Wax lagu tilmaamay culimada islaamka .
iyagoo ka wado in la keeno rag cusub oo aan shacabka somaliyeed horay u aqoonin si looga dhaadhiciyo waxa larabo ,laguna qarinayo ragii horey loo bartay ee gulwadayaasha shariifka noqday ,shirkii waa dhamaaday ,jabuutina waalaga soo kala tagay waxaana lagu hishiiyey in shirkaas la qabto jabuutina arintaas ka shaqayso.
hadii aan idiin sheego magacyadii meeshaa joogtay ,oo aan umalaynayo in inbadan oo idinka mid ah ay iska dareemi karaan ,waxaa ka mid ahaa ninka la yiraahdo bashiir salaad sheikha ugandhiiska ,iyo waliba nin lagu magacaabo Axmad xaaji c/raxman- bosaso ayuu joogaa jaamacad ku taalna wax ka dhigaa suuriyana ayuu ka yimi-iyo waliba ninka qalbiga iyo indhahaba illaahay tuuray Nuur baaruud,iyo Rag kale .
Waxaa Iyana mudan inaan xasuusino Aqristayaasha in arintaa barbar socdeen ololo mareykan oo lagu sheegayo in mareykan soomaaliya galayo ,markii hore nin aan magaciisa la sheegin ayaa laga soo xigtay ,ka dibna waxaa ka hadlay nin ka arimaha dibada mareykanka kaaliya uga ah arimaha Afrika .
intaas waxaa garabsocday buunbuuninta Saxaafada mareykanka ,waxaana iyana iska daba dayayey kooxa ridada oo la mid ah dameer dhaan raacday ,oo markii ay maqlaan meelo ayaa la duqaynayaa intay saxaafada muqdisho shir u qabtaan lahaa halaga cararo meelaha aay mujaahidiintu joogaan intaas oo kiiloo mitir.
waxaa iyana waxyaabihii ugu qosol badnaa kooxdaan wax lagu qoslo lagama waayee ,in shariifku yiri waxaan soo dhawaynaya dagaalka mareykanku ,asagoo raaciyey hadii ay jirto ,oo kutusayso sida uu khadka uga dhacsanyahay,mareykankuna u quurin xataa teleefon in loogu sheego iska daa in wafdi loo soo diree,ninka ciidanka u qaabilsan ayaa hadalkii ugu qosol badnaa ku hadlay asagoo sheegaty in guuxa habeenkasta magaalada laga maqlo iyaga garab lagu siinayo.
wuxuuna illaaway in diyaaradaha mareykanku kala aqoonin iyaga iyo mujahaidiinta oo ,iska daa in mareykanku sirtooda u sheegtaan.hadaba waxaa la yaabka noqday in fatwadaan iyo dadaalka wax lagu tilmamaay culimada islaamka ay ku soo aado iyadoo waxaas oo dhan ay garab socdaan.
hadaba mujahidiinta wax haka sheegaan ,hana dhaliilaan jihaadkooda ,lakin mareykankana soo kama horeeyo ,soo hadii cadaw soo duulo waxa kale oo dhan intii meela dhigo soo looma jeesto sidii cadawgaa looga hortagi lahaa soo dhaaranaya.
sidaas ayuu sheegayaa caqliga saliimka ah xataa marka diimaha kale la fiiriyo ama dhaqamada kale la fiiriyo ,waxaan is iri amaa raga guri lagu soo xiray sidaa dareedeed waxa socdoo dhan lama socon ,hadana waxaan is iri hadi arintaas jirto sidee ayey ugu suurta gashay inay u fatwoodaan oo umadooda u khiyaamaan.
Lakin waxaa xaqiiqado tahay in arintaan ka mid tahay barnaamij taxana ah oo horey looga shaqeeyey ,fikraduna waxay tahay markii gaaladu aragtay in caqabada koobaad oo hortaagan in ay muslimiinta qabsadaan uu yahay “QURAANKA KARIIMKA” sida uu hada ka hor yiri ra’iisal wasaarihii ingiriiska ayey ka shaqeeyeen sidii ay arintaa ugu hortagi lahaayeen ,arintuna waxay ku soo aruurtay in la sameeyo culimo quraanka sidii ay rabaan u fasirto.
waxay ku guuleysteen arintaan iyagoo u magacaabay Azhar oo ahaa Dhufaysyada ugu adage e islaamka nin siday rabaan wax u fasiro.
waxaad maqasheen ninkii lagu magacaabi jiray Dandaawi ee Sacuudiga ku bakhtiyey ,ninkaas wuxuu gaaray heer u ku aflagaadeeyo Quraanka oo ah sidii ay gaaladu rabtay ,ayaadihii jihaadka ayuu ka saaray manhajka Azhar .
tafsiir qaab daran uu asagu alifay ayuu amray in la dhigo ,fiqhigii madaahibta ayuu meesha ka saaray asagoo mid asago dajiyey amray in la dhigto.
Culimada noocaan ah ayaa aad ugu batay wadamada islaamka ,heer waxay gaartay in mareykanka iyo iiraan markii ay isdagaalaan in fatwooyin laga soo saaro sacuudiga iyo masar lagu gaaleysiinayo sheecada.
markii ay hishiiyaan mareykanka iyo iiraana fatwooyinkii labadalaayo oo la dhahaayo shiicadu waa walaalaheen ,waxaan leenahay walaaleeyntana waa mid mareykan ee maahin mid idinka idinka timi .
Hadaba noocaan culimada ah ayaa maalmhaan waxaa loo adeegsanayaa somaliya oo aan horay looga aqoonin waxaana noo keenay duulaanka mareykanka.
sidaa dareedeed la yaab maahin inay maanta dubai iskugu tagaan noocii culimada mareykanka waa sida uu bixiyey sheikh Ayman Dawaahiri-xafidahu allaah-ka dibna ay ku badalaan fataawidii ay ka soo saari jireen shiicada markii ay mareykanka is dagaalaan ama isku xumaadaan fataawi laga soo saaro mujaahidiinta somaliya.
lakin anagu waxaan leenahay waa fatawiii mareykan ee maahin mid aad idinku leedihiin.
Waxaa iyana la yaab ah in ay arki waayaan waxa dulmi iyo dhibaato ka jira wadamada ay ka soo jeedaan ,kan suufiga ah ee ka yimi moreytaaniya ee walad c/lla (walad shiiydaan) ilma adeerta yihiin waxaan leenahay ma arki waysay gabdhaha muslimaadka ee tuunis suuqyada xijaabka looga dhigaayo,kan ka yimi sacuudiga waxaan leenahay ma arki wayday dulimiga amiirada reer boqor ku hayaan dadka meeshaa dagan.
wiil soomali ah ayaa nin sacuudi daqadiisa baabuurka furay asagoo taagan meel biyaha lagu dhaamiyo oo baabuurkii yimaado la waydiiyo daqadiisana la furo.
markaas ayaa lagu xukumay intaas oo sano oo xarig ah iyo tarxiil ,markaas ayuu ku baryootamay in la tarxiilo asagoo maxkamadii ku ooyay ,dadka halkaas jooga ayaa kuu sheegaya in ay caadi tahay in dadka sidaan oo kale loo gumaysto.
hadaba sheikh sacuudiga ka yimi intuu waxaas oo dhan ka soo tagay ayuu u soo tafaruqay mujaahidiinta somaliya.
waxaan ugu jawaabayaa insha’allaah sheikh usama ayaan taageereynaa adiga iyo amiirkaaga dulmiga aad dadka ku haysaan waan ka qaban doonaa.
Su’aasha taalo ayaa ah ,shaki kuma jiro in mareykanku bilaabay inuu adeegsado noocaas aan soo tilmaamnay ee culimada u bixiyeen somaliya ,lakin maxaa xigi doona ,fatwada ku xigtana maxay tahay qardaawi ninka lagu magacaabo oo ka mid ah raga jaziira wax kale ayaa fatwo ka aqriyey aljaziira asagoo xarimay in la inkaaro mareykanka .
hadii sii socdaan fataawida noocaan oo kale ah waxaa laga yabao inaan aragno maalinta danbe sheikh bixinaya gufraanka waxa loo yaqaan ee Axada kirishtaanku u doontaan kaniisadaha.
iyadoo wadaadka halkaa jogaa ku dhaha waa la idiin dhaafay usbuucan waxaad samayseen ka dib markii lacagta uu qaato.
Waxaa laga maarmaan ah in culimad dhabta ah iyo guud ahaan umada islaamka arintaan ka digaan kana hortagaan inta aan cayaar laga dhigan diintooda ,inkastoo inta badan culimada islaamka xabsiyada aduunka ka buuxaan ugana horeeyo sacuudiga iyadoo horay looga shaqeeyay arinta si ayna culima ku sheegaan u fadeexeeyn,lakin xaqiiqadu waxay tahay in umada ka hortagto oo la fadiixeeyo noocaan cusub ka hor intaan la arag gufraan la gadanayo sida kirishtaanka.
ka dibna mareykanka iyo kirishtaanku dhahaan idinka iyo anagaba isku mid ayaan nahay maxaa yeelay ,diintiina waa halaawday teenina horey ayey u halaawday marka isku mid ayaan nahay waxaase idin dheer nahay anagu aduunyo ayaan haysanaa idinkuna akhaaro iyo aduunba mahaysaan.
Qofkasta oo muslim ah o caqli leh arintaan waa jib ayaa ka saaran maadaama uu fahmayo arinta ,umana baahno cilmi badan sababtoo ah anagoo dhan waan ognahay in cayaartahay in wadaad kaniisad jooga intii loo tago uu dhaho danbigaadi usbuucaan waala dhaafay xoogaa shilimaadna aad siiso,waxaase waax caqligu diidaayo ,waana lagama maarmaan inaan kawada hortagnaa khatarta nalala damacsanyahay.
« Wilaayada islaamiga Xarakada Shabaabul Mujaahidiin gobalka Banaadir oo shaley Burburisay Qabuuro la caabudo oo ku yiilay magaalada Muqdisho (Daawo Sawirada). Sheekh Cali Jabal “Qabri kasta oo alle sokokadiis la caabudo waan Burburi doonaa ilaa Muqdisho ka noqoto meel ka maran Shirkiga »